निजीलाई पोस्न शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरफेर — Fair Nepal
चेतन घर्ती मगरको मौलिक सालैजो ‘बेलौती’ बजारमा (भिडियोसहित)
फेयर नेपाल October 23, 2020	No Comments
काठमाडौँ । लोक तथा दोहोरी गायक चेतन घर्ती मगरको मौलिक सालैजो ‘बेलौती’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार घर्तीको अफिसियल युट्युव च्यानल मार्फत…
कोरोना महामारीकैबीच सिनेमा घरमा चलचित्र ‘शिरफूल’
फेयर नेपाल September 24, 2020	No Comments
काठमाडौँ । देश विदेश एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘शिरफूल’ कोरोना महामारीकैबीच दर्शकमाझ आउँने भएको छ । कोरोनाको विश्व महामारीले सबै क्षेत्र…
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकाे गीत ‘यो बुद्धभूमि’ बजारमा
फेयर नेपाल August 28, 2020	No Comments
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राजनीतिसँगै लेखनमा उतिकै रुचि राख्नुहुन्छ । फुर्सदका समयमा राष्ट्रियभावले ओतप्रोत गीत लेख्ने गर्नुभएका उहाँले पछिल्लो पटक…
यी हुन् छमछमी नाचौँ–नाचौँ लाग्ने तीज गीत
फेयर नेपाल August 8, 2020	No Comments
काठमाडौँ । तीज नेपाली हिन्दु नारीहरुले मनाउने एक प्रमुख पर्व हो । तीजमा पतिको दीर्घायुको कामना गरे बर्त बस्ने मात्र होइन चेलीले आफ्नो बेदना पोख्ने…
बुढा पनि सुरक्षित बुढी पनि सुरक्षित – तीज गीत भिडियाे
फेयर नेपाल August 4, 2020	No Comments
काठमाडौँ । आयुशी ढकालको नयाँ तीज गीत ‘सुरक्षित तीज’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कोरोना संक्रमणबाट जोगिने सन्देशसहितको तीज गीतको भिडियो मंगलबार ओएसआर डिजिटलको…
निजीलाई पोस्न शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरफेर
फेयर नेपाल August 22, 2018	No Comments
काठमाडौँ । सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्राय: सबै प्रावधान हटाइएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए । आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निजी विद्यालयको लबिइङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने पोसाक, दिवा खाजासमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो । घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।
‘बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन खाजा र पोसाक सुविधा दिने प्रावधान राखेका थियौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधान हटाएपछि अब धेरै बालबालिका सधैं विद्यालयबाहिरै हुने भए ।’ सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधा भने यसमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, मासिक, प्रयोगशाला, खेलकुद शुल्क लिने गरेका थिए । केही विद्यायलले शुल्कबापत अभिभावकबाट चन्दा लिने गरेका थिए । मस्यौदामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने प्रावधान राखिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पनि हटाएको छ ।
विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अभिभावकले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको छ ।
भर्ना गर्न नसके त्यसको लिखित कारण विद्यालयले अभिभावकलाई दिनुपर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
Previous Previous post: किन रोकियो कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ?
Next Next post: प्रधानमन्त्रीद्वारा गाडी नकिन्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन
अधिकांश शक्तिपीठमा मन्दिर बाहिरैबाट दर्शन
नेपाल स्पेन समाज कोष्टाब्लाङ्काद्वारा ढोरपाटनका बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
पाँच महिने शिशुसहित दुईको मृत्युु
पर्सा झडप अपडेट : परिवारले बुझेनन् चौरसियाको शव
गुणकारी गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने ?
फेयर नेपाल September 20, 2020	No Comments
काठमाडौँ । लहरेदार पतझर बिरुवा गुर्जोले बजारमा अहिले खुब भाउ पाइरहेको छ । कोरोना भाइरसका संक्रमितले गुर्जो खाएर छिट्टै कोरोना मुक्त भएको भनेपछि नेपालमा यसको…
निद्रा नलाग्ने समस्या सुधार गर्ने केही तरिका
काठमाडाैँ । अनिद्रा हामीले सोचेजस्तो भयावह पनि छैन । हार्मोनको गडबडीले हुने विशिष्ट रोग लागेको बाहेक अन्यका लागि निद्रालाई पुनःपहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ तर मिहिनेत…
काेराेना संक्रमित ४५ दिने शिशुकाे मृत्यु
फेयर नेपाल July 2, 2020	No Comments
काठमाडाैँ । काेराेना भाइरसकाे संक्रमणबाट नेपालमा एक डेढ महिले शिशुकाे मृत्यु भएकाे छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा बुधबार राति मृत्यु भएकाे हाे…
काठमाडौँ । चीनको वुहान शहरबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको कुनै औषधि…
फेयर नेपाल October 21, 2020 No Comments
१. नौमती बाजाअन्तर्गत कुन–कुन बाजा पर्छन् ?  दुई सनाही, दुई दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, ढोलक, कर्नाल र नरसिङ्गा – (यो नेपालको परम्परागत लोकप्रिय बाजा हो…
काठमाडौँ । लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खाने तपाईँको सपनामा साझेदार बन्ने हाम्रो पर्यत्न निरन्तर रहँदै आएको छ । हामीले लोकसेवा तयारीमा जुटेका तपाईँ सम्पूर्णका…
Highlights Lok Sewa Taayari
सर्वोच्च अदालतकाे आदेशपछि लोकसेवाकाे परीक्षा स्थगित
फेयर नेपाल October 15, 2020 No Comments
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले हालै जारी गरेको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ…
फेयर नेपाल October 14, 2020 No Comments
आर्थिक कूटनीति के हो ? १. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू चर्चा गर्नुहोस् ।  मुलुकको आर्थिक हितलाई ध्यानमा…